नेपाली संस्कृतिमा निकै ठूलो संकट आएको छ
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २४, २०७५, २२:२३
हाक्पारे नेपालको लोकगीतको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो। यसलाई अलि विशिष्टीकरण गरेर लैँजादा यो पूर्वी नेपालको लिम्बू जातिमा विद्यमान एउटा गीति परम्परा हो।
लिम्बूहरूको लोकगीत र संगीतमा धैरे परिकार त रहेनछन्। तर, जति छन्– धेरै गहकिला र गहिरा छन्। बाजाहरू पनि धेरै रहेनछन्। गाउँमा गाउँदा बाजागाजसँग गाइँदैन।
किन भन्दा अरुलाई सुनाउन त्यो गाइएकै होइन। आफ्नै मनको बह पोख्न अथवा आफूसँगै भएको साथीलाई मात्रै सम्बोधन गरेर गाइने हो।
टिकट काटेर स्टेजमा गाइने जस्तो होइन रहेछ त्यो। स्टेजमा प्रस्तुत गर्ने एउटा विशिष्ट कला हुन्छ। हाक्पारे गीत आफ्नै लागि गाइने रहेछ। गाउँदै हिँड्दा कसैले सुन्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो।
अहिले हाक्पारे २०/२५ जना केटाकेटी मिलेर गाइरहेका हुन्छन्। यसो हेर्दा सामूहिक रुपमा गाइएको जस्तो लाग्छ, बाहिरबाट हेर्नेलाई। तर, त्यस्तो होइन रहेछ।
एउटा केटीले गीत गाइरहेकी छिन् भने उसले आफ्नो तन्नेरीलाई मात्रै भनिरहेको हुन्छ। अर्काले पनि त्यसै गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो कुरा आफ्नो जोडीलाई भनिरहेको हुन्छ।
हामी हेर्दा पो हुलमा एकै ठाउँमा गाएको देख्छौं। उनीहरूले आफ्नै लागि गाउने हो, अरुका लागि होइन रहेछ।
यो जीवनको एउटा शैली रहेछ। धेरै प्रकारका गीत छन् होला। तर, हाक्पारे एउटा बडो गम्भीर किसिमको गीत हो। खास गरेर लिम्बू जातिले यो संसारलाई हेर्‍यो होला, सृष्टि कसरी भयो भनेर सम्झियो होला।
सृष्टिको क्रममा मान्छे विकसित भइसकेपछि उसका जीवनमा दुःखदायी घटनाहरू हुन थाले। त्यसलाई पर्गेल्ने कामहरू हुन थाले। र, त्यो जान्नेले आफ्नो अवसर विशेषमा सुनाउन थाल्यो।
त्यसरी सामूहिक रूपमा सुनाउँदा एउटा फाइदा के भयो भने हाम्रो ज्ञान पछिल्लो पुस्ताले पाउने र जीवन कसरी सुखपूर्वक जिउने भन्ने उत्प्रेरणा पनि दिने भयो।
लिम्बूको ‘पिच्चम’ भने एउटा देउता रहेछ। त्यसलाई रातभरी गीतमात्रै गाएर बस्नुपर्ने, त्यो पनि हाक्पारे। धुप बालेर फलाक्ने होइन। रातभरी गाइराख्नुपर्ने। यसले देखाउँछ, लिम्बू जातिमा गीत–संगीतको परम्परा प्राचीन कालदेखिको हो।
मलाई निकै अघि एकजना महिलाले सोध्नुभयो, ‘हाम्रा गीतहरू किन यति साह्रो विरहलाग्दो छन्? केटाकेटी एकअर्काको हात समाएर गाउँदा त खुसी पो हुनुपर्ने त?’
यो कसरी भयो त? मलाई लाग्छ, यो लिम्बू जातिको जीवन र जगत हेर्ने दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित रहेछ।
मान्छेको सृष्टि भइसकेपछि यो कर्म पूरा भयो। तर, एउटा चिजमा सृष्टिकर्तालाई पनि चित्त बुझेनछ। त्यो के भने, मान्छे मरणशील भयो। उसका सारा प्रयत्न निष्फल भए। यो सृष्टिको दुखान्त अवस्थालाई हेरेर लिम्बूहरूले खुसीमा गाइरहेको गीतमा पनि विरह अनि व्यथाको रङ देखिने रहेछ।
यतिको सफलतपछि पनि मान्छे चीर जीवन पाउने प्राणी हुन सकेन। हामी जिन्दगीका लागि जति गर्छाैं, त्यो एक बित्ताको, एक दिनको समयसम्म बाँचेर गर्ने रहेछौँ। यही चेतनाले गर्दा नै लिम्बूहरूको हाक्पारे गीतमा वेदनाका कुरा गाएको होला जस्तो मलाई लाग्यो।
अहिले रैथाने संगीतको जुन अभियान सुुरु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। विश्वकै इतिहास हामीले हेर्यौं भने सन् १९५० अघि नै 'सर्च फर दि रुट' (जराको खोजी) हुन थाल्यो।
हामीले पछिमात्र आफ्नो पहिचानको खोजी राजनीतिक रुपले गर्न थाल्यौँ। जति छिटो हामी ग्लोबलाइजेसन (विश्वव्यापीकरण) हुन थाल्यौं, उति नै छिटो हामीले लोकलाइजेसन (स्थानीयता)को कुरा गर्न थाल्यौँ। आफ्नो पहिचानको कुरा गर्न थाल्यौँ।
अमेरिका अहिले तर्सेको छ। त्यहाँका राष्ट्रपति आफूमात्रै बाँच्नुपर्छ भनेर कराउन थालेका छन्। बेलायतले युरोपेली संघ (इयू)बाट आफूलाई पन्छाएर आफ्नो पहिचान कायम गर्न थालिसक्यो।
हाम्रो पहिचानलाई जुन रफ्तारमा भूमण्डलीकरणले असर गरिरहेको छ, त्यही रफ्तारमा आफू र आफ्नोपनलाई जोगाउन हामी सतर्क भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
संगीतमा पनि रैथानेपन जोगाउन हामी सर्तक हुनुपर्छ। नेपाली संस्कृतिमा अहिले निकै ठूलो संकट आएको छ। अहिले कलाकार, साहित्यकार सतर्क भएर त्यसमा लागेका छन्।
हामी आफ्नै भाषामा गीत त गाइरहेका छौं। ‘मैले मेरो भाषामा गाएँ, मौलिकता बचाएँ’ भनेर मक्ख परिरहेका छौँ। त्यो साँच्चिकै हो, कि होइन? हामीले जान्नु आवश्यक छ।
नवीन सुब्बा (सिनेकर्मी)ले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका रहेछन्, ‘एकचोटी नेपाली सिनेमालाई हिन्दीमा अनुवाद गर्दिउँ त, त्यो नेपाली हो कि हिन्दी हो? अनि यथार्थ छुट्टिन्छ।’
हिन्दीमा अनुवाद गर्दा सारा दृश्य, संवाद, कलाकौशल नै हिन्दीको जस्तो भयो भने त्यो हाम्रो कसरी हुन्छ? यो चिन्ता नवीनहरूले वैकल्पिक सिनेमाको अभियान जतिबेला थाले, त्यति बेलादेखि नै प्रकट भयो।
झुमा (गायिका झुमा लिम्बू)ले एक ठाउँमा राम्रो कुरा उठान गर्नुभएको रहेछ। उहाँले भन्नुभएको छ,‘मैले बाहिर जाँदा आफ्नो मातृभाषामा गीत गाएको कस्तो राम्रो भएको छ भन्ने ठानेको थिएँ।
तर, मलाई सोधियो, 'तिम्रो मातृभाषाको गीत मातृभाषामा मात्रै छ कि गीतभित्र तिम्रो जातिको रीति, परम्परा पनि प्रतिबिम्बित छ?' त्यो प्रश्नले म छक्क परेँ।
रैथाने संगीतले प्रतिनिधित्व गर्नुपने त्यो चिज हो। यो चिजको अभावमा हामीले जति फुर्ति लगाए पनि मनोरञ्जनको साधन त हुन्छ। तर, त्यसमा निहित रैथानेपन शून्य हुन्छ।
हामीले अरुका कुरा सिक्नुहुँदैन भन्ने होइन। म पनि परम्पराविरुद्ध कविता लेखेर उठेँ। यो परम्परा भनेको थोत्रे चिज हो भनेर कराएँ। एकछिन फुर्ति लगाएँ।
एकदिन मैले साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईलाई सोधेँ, ‘हामी यसरी चम्केको साँच्चै परम्परा त्यागेरै चम्केको हो?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुरा त ठीकै हो। तर, खोला छङछङ बग्दै आउँछ। पानीको थोपा उछिट्टिन्छ। त्यसमा इन्द्रेणी देखिन्छ। सबैले मन पराउँछन्। उछिट्टिएको पानी एक ठाउँमा त खस्नुपर्छ। त्यो थोपा ढुंगामा खस्छ। तर, कतिन्जेल रहन्छ त्यहाँ पानी? घाम चर्को लागेपछि त सुक्छ। नसुक्नका लागि त्यही खोलामा पस्नुपर्छ।’
जतिसुकै हामीले क्रान्तिको कुरा गरे पनि हामी हाम्रो परम्पराभित्र सम्मिलित हुन सकेनौँ, परम्परालाई नयाँपन दिन सकेनौं भने हाम्रो नयाँपनका लागि गरिएको आग्रह फजुल भएर जान्छ।
हामी क्रान्ति गर्छौं, विद्रोह गर्छौं। अन्ततः हामी राम्रो परम्पराको गुणमा आवद्ध भएर जानुपर्छ।
हामीले संसारका नयाँ कुरा सुनौंला। पहिले हामीले हिप्पीहरू सुन्यौं। तर, अहिले आएर हामीले झन्डै १५/२० वर्षयताका कुरा सुन्यौँ भने सबै आधुनिक र अति-आधुनिक गीतले पनि आफू जीवन्त र लोकप्रिय हुनका लागि लोकलयलाई माध्यम बनाएको छ, उपयोग गरेको छ।
अन्ततः बचाउने चिज त यो रहेछ। लोकलय भनेको परम्पराको कुरा रहेछ। यसभित्रको राम्रो कुरालाई हाम्रो मौलिकता जोगाउनमा संगीतकर्मीहरूको ठूलो योगदान छ।
(रैथाने संगीत समूहले मंगलबार राजधानीकाे शिल्पी थियटरमा आयोजना गरेको हाक्पारे गायन प्रस्तुति तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कवि तथा मुन्धुमविद् काइँलाले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश। तस्बिर : गणेशकुमार राई)
सरकारले भक्तपुरमा घडेरी बेच्दै, प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँबाट मूल्य सुरु
सरकारले भक्तपुरमा घडेरी बेच्दै, प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँबाट मूल्य सुरु शुक्रबार, असार २६, २०७७